N.O.V.A. Legacy 5.8.0m Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.8.0m လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ N.O.V.A. Legacy
N.O.V.A. Legacy ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
The Legend ပြန်လည်မွေးဖွား & REMASTERED
N.O.V.A. သေနတ်သမားတစ်ဦးကျစ်လစ်သိပ်သည်းဗားရှင်းအားလုံးကို - အမွေအနှစ်ကိုသင်စိုးရိမ်ရကောင်းချီးခံသော N.O.V.A. ၏မော်ကွန်းပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံး 3D သိပ္ပံဝတ္ထု FPS အတွေ့အကြုံကိုတတ်၏။
Kal Wardin ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတစ်ဝါရင့်ဖြစ်ပါတယ် N.O.V.A. မိမိအမိုဘိုင်းသံချပ်ကာဝတ်စုံ Don နှင့်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်ဒဏ်ခတ်ဖို့တစ်ဖန်ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်အဏ္ဏဝါ။
အမျိုးသမီး Yelena အားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်, သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး AI အအေးဂျင့်, Kal သူတို့ရဲ့ရုတ်တရက်ချေမှုန်းရေးနောက်ကွယ်မှနက်နဲသောအရာကိုဖုံးကွယ်စဉ်ဂြိုလ်သားကျူးကျော်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရေးမြားတှငျပါဝငျခွငျးဖွငျ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
multiplayer နယ်ပယ်တွင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှု Test
- Deathmatch: ပြီးခဲ့သည့်သေနတ်သမား 8 တိုက်ပွဲဝင်ဘို့အွန်လိုင်းမှ multiplayer စစ်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရပ်နေပါ။ အဆိုပါကျည်ဆန်မှန်ထဲမှာဖမ်းမိဖို့မကြိုးစား!
- ရေးအဖွဲ့ Deathmatch: တစ် 4v4 multiplayer သပိတ်၌ရှိသောကျည်ဆန်ရေတွက်စေ။
- အထူး 3D မော်ဒယ်များနှင့်အရေခွံအမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏အဏ္ဏဝါစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
- အွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ Top နှင့်သင့်ကံကြမ္မာကိုအောင်မြင်ရန်အသင်းကြီးကိုတက်။
- စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ 3rd-လူတစ်ဦး "" မရဏ Cam "" မည်သူမဆို၏ replays အဆိုပါကျည်ဆန်မှန်ထဲမှာဖမ်းမိသို့မဟုတ်စစ်မြေပြင်ပေါ်တက်လွတစ်စနိုက်ပါများကဒဏ်ခတ်။
- သင့်စနိုက်ပါရိုင်ဖယ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုရန်သင့်ကျည်ဆန်များ၏အင်အားသုံးမှတစုံတခုကိုမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောကွဲပြားခြားနားသောဆုကြေးငွေကိုထည့်သွင်းဖို့သင့်ရဲ့ဝတ်စုံ Core Upgrade ။
- အောင်သွယ်: ပုဂ္ဂလိက multiplayer ပွဲများအတွက် password များ Set ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြင့်အွန်လိုင်းအောင်သွယ်ပွဲစားစနစ်အားအသုံးပြုပါ။
မိုဘိုင်းပေါ်တွင်တစ်ဦးက Console-like အတွေ့အကြုံ
- ခေတ်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးကဲ့သို့တူညီသောသွေးကြောထဲမှာကျော်ကြား Gameloft FPS စီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာအော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းသေနတ်သမားအတွေ့အကြုံကို။
- ယာဉ်နှင့်တာဝေးပစ်ကျည်ဆံတွေနဲ့အတူစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်ကနေအကြီးအကျယ်အင်အားသုံးနှင့်အတူပလာစမာသေနတ်များရန်, ကတ်များစုဆောင်းနေဖြင့်သိပ္ပံဝတ္ထုသေနတ်များနှင့်ခေတ်မီလက်နက်များအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ လက်ျာဘက်ဂီယာထားရှိခြင်းသည်အရေးပါသည်!
- မူရင်း N.O.V.A. ခံစားကြည့်ပါ တိုးမြှင် 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်းတွေနဲ့သေနတ်သမားအတွေ့အကြုံကို။
- အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးကမ္ဘာမြေကာကွယ်ပေးဖို့ Single-player ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအော့ဖ်လိုင်း Play ။
အမျိုးမျိုးသော GAME mode မှာရှုံးနိမ့်ဂြိုလ်သား Force
- ပုံပြင် Mode ကို: ဇာတ်လမ်းအော့ဖ်လိုင်းသို့ delve နှင့် 19 အရေးယူမှု-ထုပ်ပိုး FPS အဆင့်ဆင့်တွင်ဤတပါးကျူးကျော် ပတ်သက်. အမှန်တရားဖော်ထုတ်ပေးဖို့စစ်တိုက်ခြင်း။
- အရိပ်မစ်ရှင်များ: ကန့်သတ်အချိန်စစ်မြေပြင်စိန်ခေါ်အပေါ်ထိုးနှက်တပါးအထူး Ops တပ်မှ။
- အထူး Ops: ထူးခြားတဲ့ဂြိုလ်သားဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်တစ်ဦးဝေဖန်သပိတ်စတင်ရန်။
Facebook မှာ: http://gmlft.co/SNS_FB_EN
Instagram ကို: http://gmlft.co/GL_SNS_IG
YouTube ကို: http://gmlft.co/GL_SNS_YT
N.O.V.A. Legacy အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
N.O.V.A. Legacy အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
N.O.V.A. Legacy အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
veryhard စတိုး46.62k
N.O.V.A. Legacy ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း N.O.V.A. Legacy အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.8.0m
N.O.V.A. Legacy APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ